Qiso aan la’ilaawi karin oo dhex martay wiil iyo gabar Somaliyeed “Qiso Murugo Leh” | War Helaa Talo Hela	Sunday, May 26th, 2013	Home
Qiso aan la’ilaawi karin oo dhex martay wiil iyo gabar Somaliyeed “Qiso Murugo Leh”
Published on August 9, 2012 by News24 · 8 Comments
Qisadaan ayaa waxay dhex martay lamaane Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Qadar iyo Hibaaq, Qadar ayaa ka sheekeeyay qisadaan naxdinta leh.
Waxaan ku dhashay magaaladda muqdisho, waxbarashadeyda ayaa waxaan kusoo qaatay iskuulka Al Caynaan oo ku yaalla degmadda Hodan ee magaaladda muqdisho, intii aan dugsiga sare dhiganaayay ayaa waxaa maalin maal maha kamid ah aan iskuulka ku arkay Hibaaq oo cusub, isla- markaana dooneysa inay iska diiwaan geliso iskuulka.
Anigoo banaanka iskuulka taagan ayay wax iga weydiisay iskuulka, xilligaas waxaa la-socotay hooyada dhashay Hibaaq, sidii ayaa waxaan uga waramay wax-qabadka iskuulka, taa oo keentay inay Hibaaq kamid noqoto ardaydii iskuulka Al Caynaan.
Hibaaq ayaa waxaa si wanaagsan iskugu dhex baranay iskuulka intii aanu wada dhiganeynay, waxaana muddo kadib inoo suurta gashay inaan ka wada hadalno teleefanadii xilligaa inoogu jiray guryaha, waxaana noqonay lamaane is-kaftan yaqaano, wax walbana isku sheegta.
Hibaaq waxaan isku qaadnay jaceyl, isla-markaana waxaanu isku afgaranay inuu ina dhex maro xiriir jaceleed, waxaana isla soo qaadanay waqti wanaagsan, jaceyl daacad ku dhisan iyo anagoo noqonay laba qof oo u dhaqma sida dadka maanta loo-yaqaano Romantic People, micnaha dad wax ka yaqaano nolosha adduunka.
Hase ahaatee iyadoo ay sidaasi xaaladdu tahay ayaa waxaa magaaladda muqdisho xoog kusoo galay ciidamadda gumeystaha madow ee Itoobiya, kuwaa oo maalin maal-maha Hibaaq iyo gabar kale oo la-socotay gaari BL ah kala dagay, xilli ay maraayaan wadada miisaanka dhuxusha ee degmadda Yaaqshiid.
Waxay geysteyn fariisimaha ay ku lahaayeen Garoonka Kubadda Cagta ee Stadium muqdisho, isla-markaana waxay u kafsadeen sidii ay doonaayeen, iyagoo saacado kadib iska soo fasaxay, hase yeeshee in cabaar ah markii ay sii socdeen ayay dhabarka ka toogteen (Alla Xanuun Badanaa).
Islaan waayeel ah oo gaariga la-saarneyd Hibaaq iyo gabadhii kale ayaa waxay ehelka Hibaaq u soo sheegtay in gabadhii Hibaaq aheyd ay la-tageyn ciidamadda gumeystaha madow ee Itoobiya, habeenkii ayuu wiil la-dhashay Hibaaq i soo wacay, isagoo iga sheekeeyay dhacdadii foosha xumeed ay ku dhacday Hibaaq, xilligaa wixii ka dambeeyay waxaan ku biiray ciidamaddii maxkamadaha Islaamigaa ee xilligaa loo-yaqaanay muqaawamada.
Habeen walba ama galab kasta waxaan kamid ahaa ciidamaddii weerarka ku qaadi jiray ciidamadii Itoobiya ee xilligaa ku sugnaa magaaladda muqdisho, daba-yaaqadii sanadkii 2008-dii ayaa waxaan ku dhaawacmay weerar goor galab ah aanu ku qaadnay qaar ka tirsan ciidamaddii Itoobiya ee ku sugnaa Warshadii Baastada, balse dhaawaceyga ayaa wuxuu iska ahaa mid fudud.
Ugu dambeen hada waxaan ku noolahay dalka Sacuudiga, waxaana iska ahay arday waxbarta, balse waxaa mooddaa inaanan weli ilaawin Hibaaq oo ay igaga taallo beerka, Mar walbana waxaan Alle uga baryaa in uu ugu bishaareeyo Janno.
maryan says:	August 9, 2012 at 10:39 pm	allaha unaxariisto abayadey adigane waxa tahay wiil fiican hadii aad jeceykaagi dartiis aad ugu biirtay maxaakiinta si aad ula dagasho gumeysigii jiray waqtigaas lkn wlh sida ilah igu ogyahay wan ooyay waxaana intii sheekada aan aqrinaayay iqabatay calool xumo weyn iyo ciil hadal iyo dhamanatii sabar
Log in to Reply	Maxamed xasan says:	August 10, 2012 at 9:54 am	Aamiin aamiin aamiin janada firdowso ilaah ha kaso
Log in to Reply	Mo' joseph says:	August 10, 2012 at 9:57 am	Qadar walal iska samir waayo ruuxi sabra sadkis hella iskuna day markale inad calafkaga tijaabiso wixii dhacayna iska ilaaw wlhi wa qiso xanuun badan hibaaq waxan Ilaah sw uga baryeeyna janno gacan ka xaq daran aya dishay adna mid kalo ku raali galisa iyo nolo cusub insha Allah
Log in to Reply	Abdimalik says:	August 10, 2012 at 12:22 pm	Amin amin janada fardowsa alah kawarayewo
Log in to Reply	ruuxi says:	August 10, 2012 at 4:01 pm	asc walaalkay samir alaha kasiiyo gaberta janadana alaha ugubishareyo aamiin aamiin
Log in to Reply	Ikraam says:	August 10, 2012 at 4:15 pm	Asc walaal sabar alaha kaa siiyo walasheen hibaaq janadana alaha ka waraabiyo adigana geesimadada aa ciidamada cadawga uladaga lameese ajar aan lasoo koobi karin kaa siiyo adna badal qeer qabo kusiiyo waliba midaa kunasato salaad kasto tukatana walasha udu cey insha alaah wcs
Log in to Reply	afflibaax says:	August 11, 2012 at 8:48 am	saaxiibkey waxaan leeyahay waad calool nugushahay saaxiib,somalia wixii ka dhacay 20kii sano ee la soo dhaafay wax ka soo qaad iyo sheeg sheegis ma leh.Dad baa hortooda lagu fuulay walaashood ama gabadhoodii ama xaaskiisii, waxaana saas yeelay sokeeye iyo shisheeyaba.Waxaad ka hadashay qeyb yar oo raqiis ah ee nac-nacda iska daa walaal.
Log in to Reply	sacdiya says:	August 13, 2012 at 6:25 pm	walal samir iyo iman alle haka siiyo walalshena hibaaqna janatul fardoosa alle haka warabiyo aamiim aamiin yaa allaah